Shir Heer Qaran Ah Oo Kafurmay Xarunta Deegaanka - Cakaara News
Shir Heer Qaran Ah Oo Kafurmay Xarunta Deegaanka
Jigjiga( Cakaaranews ) Arbaco, 30ka march 2016. Waxaa saaka hoolka shirarka ee qaryaan dhoodaan ee xarunta deegaanka kafurmay shirkii qiimaynta waxqabadka komishinka anshaxa iyo ladagaalanka musuqa heer qaran oo sida caadada ah sanad walba laba jeer laqabto.
Hadaba shirkan ayaa waxaa kasoo qaybgalay kuxigeenka komishinka anshaxa iyo ladagaalanka musuqa ee JDFI mudane Wadhu Adhu, madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar, dhamaan komishineerada komishinka anshaxa iyo ladagaalanka musuqa 9ka dawlad deegaan iyo 2da ismaamul ee Jamhuuriyada Dimoqraadiga federaalka itoobiya ay kakooban tahay.
Waxaana furitaankii shirka kahadlay komishineer kuxigeenka komishinka anshaxa iyo ladagaalanka musuqa JDFI mudane Wadhu Adho oo kawarbixiyay dhibaatooyinkii musuqu kulahaa dalka iyo sida loo yareeyay isagoo kadibna madasha kusoo dhaweeyay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar.
Hadaba, Madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa kawaramay xaaladihii musuqa ee deegaanka kasoo jiray 20kii sano ee lasoo dhaafay iyo isbadalka lataaban karo 5ta sano ee dhinac walba isagoo madaxwaynuhu aad ubogaadiyay in shirarka heer qaran lagu qabto deegaanka. Taasoo tusaale cad u noqonaysa isbadalka xawliga ah ee horumarka, nabadgelyada iyo maamulka suuban ee deegaanka kahanaqaaday oo ay udub dhaxaad u tahay kamadhnaanshaha iyo dib u curashada musuqa.
Ugudanbayna, shirkan oo socon doona mudo 4 maalmood ah ayaa lafilayaa inuu kusoo gabagaboobo guulo wax ku ool ah oo bar-bar socda hirgalinta qorshayaasha horumarineed ee dalkeenu kaga mid noqonayo wadamada uu dhaqaalahoodu dhex-dhexaadka yahay